လှပတဲ့ ဘော်ဒီလေး ကို အထင်သား ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး ဝတ်ဆင်ကာ မြင်သူငေးရလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုပိုလွန်းနေတဲ့ စံရတီမိုးမြင့် – Let Pan Daily
ပရိသတ်ကြီးရေ…. အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို အခိုင်အမာ ရရှိ သိမ်းပိုက်ထားပြီး ညို့အားပြင်းတဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူလေးကတော့ မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး စံရတီမိုးမြင့် ပဲဖြစ် ပါတယ်။ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သဲကတော့ သရုပ်ဆောင် ကောင်းသူလေး ဖြစ်တဲ့ အပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဟန်ပန် အမူအရာလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားထားတဲ့ မင်းသမီး တစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စံရတီမိုးမြင့်ဟာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား ပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးထားသူလေး ဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကောင်ကို ပီပြင်အောင် ကြိုးစား သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အပြင် ကျော့ရှင်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကလည်း မိန်းကလေးတိုင်း သဘောကျတဲ့ ဘော်ဒီလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထား သူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်…….။ သဲကတော့ သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို အမြဲ မျှဝေလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပြီးတော့ လတ်တလော မှာ ဆိုရင်လည်း ကြော်ငြာတွေနဲ့ Live Sale တွေမှာ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ရှိနေ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ သဲ ရဲ့ လူမူကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်တွင် “သူမချစ်ခိုင်းလည်း မုန်းလို့ မဖြစ် အချစ်က အမုန်းမဟုတ်ဘဲနော် အသက် သွေး နဲ့ဘဝ”ဆိုတဲ့ ကဗျာ ဆန်တဲ့ စာသားလေးနဲ့ အတူ အကြမ်းစား ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေး လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေ ကလည်း စံရတီမိုးမြင့်ကို ထပ်ပြီး ချစ်ခင် အားပေးနိုင်စေရန် အတွက် သဲရဲ့ လှသွေးကြွယ် နေတာလေးကို ကြည့်ရှုခံစား ရအောင် ပြန်လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
Photo Credit -Naing Naing Tun ( Exposure )
ပရိသတ္ႀကီးေရ…. အႏုပညာေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို အခိုင္အမာ ရရွိ သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ညိဳ႕အားျပင္းတဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈ အလွတရားေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ သူေလးကေတာ့ ေမာ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး စံရတီမိုးျမင့္ ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ပရိသတ္ေတြက ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကတဲ့ သဲကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေကာင္းသူေလး ျဖစ္တဲ့ အျပင္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဟန္ပန္ အမူအရာေလးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ဖမ္းစားထားတဲ့ မင္းသမီး တစ္လက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
စံရတီမိုးျမင့္ဟာ ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ေပါင္းမ်ားစြာကို ႐ိုက္ကူးထားသူေလး ျဖစ္ၿပီး ဇာတ္ေကာင္ကို ပီျပင္ေအာင္ ႀကိဳးစား သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အျပင္ ေက်ာ့ရွင္းတဲ့ အလွတရားေတြနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားကလည္း မိန္းကေလးတိုင္း သေဘာက်တဲ့ ေဘာ္ဒီေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထား သူေလး ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…….။ သဲကေတာ့ သူမရဲ႕ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္ေလးေတြကို အၿမဲ မွ်ေဝေလ့ရွိတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လတ္တေလာ မွာ ဆိုရင္လည္း ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ Live Sale ေတြမွာ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ရွိေန သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုအခါမွာေတာ့ သဲ ရဲ႕ လူမူကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာထက္တြင္ “သူမခ်စ္ခိုင္းလည္း မုန္းလို႔ မျဖစ္ အခ်စ္က အမုန္းမဟုတ္ဘဲေနာ္ အသက္ ေသြး နဲ႔ဘဝ”ဆိုတဲ့ ကဗ်ာ ဆန္တဲ့ စာသားေလးနဲ႔ အတူ အၾကမ္းစား ပုံရိပ္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပး လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ ကလည္း စံရတီမိုးျမင့္ကို ထပ္ၿပီး ခ်စ္ခင္ အားေပးႏိုင္ေစရန္ အတြက္ သဲရဲ႕ လွေသြးႂကြယ္ ေနတာေလးကို ၾကည့္ရႈခံစား ရေအာင္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။
ကျွန်မ ပြည်သူတွေ သိပ်တော် တာပဲ ဆိုတဲ့ အသံလေး ကြားချင် လှပါပြီ လို့ဆိုလာတဲ့ G-Fatt
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး ချွေးတွေ စိုနေတာ တောင် အလှပျက်ခြင်း မရှိဘဲ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်နဲ့ အရမ်းလန်းနေတဲ့ မအေးသောင်း ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး